Wakaaladaha wararka Turkiga iyo Soomaaliya oo heshiis kala saxiixday - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaWakaaladaha wararka Turkiga iyo Soomaaliya oo heshiis kala saxiixday
June 5, 2016 Abdi Omar Bile Somalia 0
Wakaalada wararka Turkiga (Anadul) ayaa heshiis iskaashi ah la saxiixatay wakaalada wararka dowlada Soomaaliya intii lagu guda jiray booqashadii madaxweyne Rajib Dayib Erdogan uu ku tagay Soomaaliya.
Agaasimaha guud ee Anadul Senol Kazanci iyo agaasimaha wakaalada wararka qaranka Soomaaliya (SONNA) Cabdiraxmaan Yuusuf Al-cadaala ayaa jimcadii heshiiska ku gaaray in labada wakaaladood ay isa siiyaan qoraalada, sawirada iyo muuqaalada.
Xaflada oo lagu qabtay Muqdisho ayaa waxaa ka qaybgalay Madaxweyne Erdogan iyo dhiggiisa Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud.
August 30, 2016 Sarkaal sare oo Al-Shabaab ah oo isku soo dhiibay gacanta dowlada federaalka Soomaaliya
December 14, 2017 Ugu yaraan 13 askari oo booliis ah oo ku dhintay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay xero booliis oo kutaala Muqdisho
February 16, 2018 Sargaal katirsan Al-Shabaab oo isku dhiibay ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobolka Gedo
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa ka gaabsaday ka jabaabista in uu u tartamayo xilka mar labaad. Isaga oo saxaafada kula hadlayay Garoowe maanta oo Sabti ah kadib markii uu ka soo noqday [...]
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland’s Galkayo local councilors have been elected Mohamed Yasin Ahmed “Tumay” as the new mayor of the town. Mr. Tumay defeated his closest competitor Deq Mohamoud Hashi by 24 votes during the last [...]